कोरोना रिपाेर्ट: एकैदिन स्टारमा पोजेटिभ, ग्राण्डी र केएमसीमा नेगेटिभ, फ्लाइट छुट्यो - Naya Sanchar
कोरोना रिपाेर्ट: एकैदिन स्टारमा पोजेटिभ, ग्राण्डी र केएमसीमा नेगेटिभ, फ्लाइट छुट्यो
१३ मंसिर २०७७, शनिबार २२:५२
काठमाडाैं । कोरोना परीक्षणको रिपोर्ट पोजेटिभ आएपछि संक्रमितहरू स्वतः आत्तिने गर्दछन् । तर पहिलो परीक्षणमा पोजेटिभ रिपोर्ट देखिएपछि पुनः शंका लागेर रिपिट टेष्ट गर्दा नेगेटिभ आएका घटना पनि देखिएका छन् । पोजेटिभ रिपोर्ट आएलगत्तै परीक्षण गर्दा नेगेटिभ देखिएपछि संक्रमितमै अन्यौल सिर्जना भएको छ ।
पोजेटिभ रिपोर्ट आएका कारण संक्रमित मात्र होइन, तर तिनीहरूका परिवार र तिनीहरूसँग सम्पर्क भएकाहरूमा पनि तनाव सिर्जना हुन्छ । यस्तै तनावको शिकार हुनुभएको छ– कतार एअरवेजका एक कर्मचारी ।
काठमाडौंको दक्षिणकाली नगरपालिका–४, बाँसबारी घर भएका सन्जेश तामाङ आज (शनिबार) कतार जाने अन्तिम तयारीमा हुनुहुन्थ्यो । विदामा नेपाल आएका बेला कोरोना महामारीसँगै लक डाउन लगायतका समस्याले समयमै फर्कन सक्नुभएन।
एअरवेजले बोलाएपछि सबै तयारी सकेर कोरोना टेष्टको लागि उहाँ कतार एअरवेजले मान्यता दिएका ल्यावमध्ये नजिकैको सानेपामा रहेको स्टार अस्पतालमा पुग्नुभयो। फ्लाइट नोभेम्बर २८ बिहान ११ बजे भएकाले उहाँले २६ तारिखमै स्वाब दिनुभयो ।
स्वाबको रिपोर्ट नोभेम्बर २७ दिउँसमे १/२ बजेसम्म आउनुपर्नेमा अस्पतालले उहाँलाई हिजो दिएको स्वाब भएन भन्दै पुनः स्वाब दिन अस्पताल आउन भन्यो र तामाङले स्वाब दिएर अर्जेन्ट भएकाले रिपोर्ट कुर्न अस्पतालमै राति १० बजेसम्म बस्नुभयो। उक्त स्वाबको रिपोर्ट पोजेटिभ देखियो ।
न उहाँमा कुनै लक्षण न कुनै शंका, कोरोना पोजेटिभ आएपछि थप तनावमा पर्नुभयो सन्जेश । एअरवेजकै कर्मचारी भएकाले उहाँ दोहास्थित कार्यालयसँग इमेलमार्फत निरन्तर सम्पर्कमै हुनुहुन्थ्यो । तर जब कोरोना पोजेटिभ भएको रिपोर्ट हातमा पर्‍याे, न पोजेटिभ आयो भनेर कतारमा खबर गर्नु, न रिर्पोट आएको छैन फ्लाइट सार्न अनुरोध गर्नु उहाँ अलमलमा पर्नुभयो ।
साथीहरूको सुझाव र आफूमा कूनै लक्षण नभएकोले उहाँले शनिबार बिहान ग्राण्डी अस्पतालमा पुगेर पुनः परीक्षण गराउनुभयो । लक्षण केही नदेखिएका कारण बिहान आएको रिपोर्टमा चित्त नबुझी उहाँले रिपिट टेष्ट गराउनुभएको थियाे । रिपिट टेष्टको रिपोर्ट भने नेगेटिभ आयो ।
अझै ढुक्क हुन उहाँले शनिबारनै काठमाडौंको केएमसी अस्पतालमा अर्को स्वाब पनि दिनुभयो । साँझ उक्त रिपोर्ट पनि नेगेटिभ आएको छ ।
यसले कोरोना परीक्षणको रिपोर्ट पनि एक दिनमै अस्पताल र ल्यावअनुसार फरक फरक देखाउने गरेको पाइएको छ ।
“अब कुन रिपोर्टलाई पत्याउने ? केही घण्टाकै बीच पोजेटिभ र नेगेटिभ रिर्पोट छ, म संक्रमित कि संक्रमणमुक्त ?”, ग्राण्डीबाट प्राप्त ल्यावको कोरोना नेगेटिभ रिर्पोट लिएर स्टार पुगेका उहाँले भन्नुभयो, “मेरो स्वास्थ्यमाथि खेलबाड भयो, यसको जवाफदेहीता को हुने ? सँगैका साथीहरू गए, म त यतै रोक्किएँ त्यही पनि गलत रिपोर्टका कारणले ।”
स्टार अस्पाताललाई सरकारले पुनः छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्ने उहाँको माग छ । अस्पतालको लापरबाहीले समयमा कतार जान नसकेको जिकिर गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “कि त स्टारको मेसिन खराब छ कित अन्य दुई अस्पतालका, यसको छानबिन हुनुपर्छ, म कानुनी प्रक्रियामा जान्छु ।”
स्टार अस्पतालका प्रयोगशालाका कर्मचारीले भने अस्पतालको बचाउ गर्दै भने, “स्टार अस्पतालको “पीसीआर मेसिन हाईसेन्सेटिभ हो, गलत रिर्पोट हामीले दिएका होइनौँ, पहिलो स्वाबमा शंका भएपछि पुनः स्वाब गरेका हौं ।”
अरु अस्पताल र ल्यावको जिम्मा लिन सक्दैनौं : स्टार अस्पताल
केही घण्टाको फरकमै एक ठाउँमा पोजेटिभ, अर्कोमा नेगेटिभ कसरी भन्ने प्रश्नमा उहाँ भन्नुहुन्छ ,“हामीले अरु अस्पताल र ल्यावको जिम्मा लिन सक्दैनौं, उहाँको कोरोनाको सिटी भ्यालू कमजोर (३० माथि) रहेकोले पुनः परीक्षणमा नेगेटिभ आउनु नौलो कुरा होइन ।”
केही दिनअघि मात्र सरकारले नक्कली पीसीआर रिपोर्ट बनाउने कार्यमा संलग्न रहेको आशंकामा स्टार अस्पतालसहित ४ अस्पतालका प्रयोगशालालाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।
प्रयोगशालाहरूले नमुना संकलन गरेपछि नेगेटिभको हकमा १ महिना र पोजेटिभको हकमा ३ महिना स्टोर गरी राख्नुपर्नेमा समेत अटेर गरिरहेका छन् । सन्जेश एक प्रतिनिधि पात्र मात्र हुनुहुन्छ, पछिल्लो समय निजी प्रयोगशालाले कोरोना टेष्टको अनुमतिपाएसँगै कोरोना रिपोर्टको आधिकारिकता माथि बारम्बार प्रश्न उठिरहेको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कारबाही गर्ने चेतावनी दिए पनि निजी अस्पताल र प्रयोगशालाहरूले कोरोना परीक्षणको शुल्क र यथेष्ट रिपोर्ट दिने सवालमा मनोमानी गरिरहेका छन् ।
Tags: #काेभिड राजनीति, #काेराेना